दिउँसो २:४० को यति एयर्लाइन्सको फ्लाइट थियो नेपालगञ्जको लागि। डीपाचर हलमा छिरेको केहि बेर सम्म तनाब भयो नबुझिने माइकको आवाजले यता जाउ कि उता जाउ भयो। दगुर्दै यतिको काउन्टरमा पुगेको जाहजमा बोर्डिंग सुरु भएको रहेछ,हतार हतार जहाज तिर लागियो। करिब ५० मिनेटको उडान…
११ असोज । रुकुम पश्चिमको वाँफिकोट गाउँपालिकामा आजबाट दोस्रो स्यार्पू पर्यटन महोत्सव सुरु भएको छ । गाउँपालिकाको आयोजनामा वडा नम्वर ३ र ५ मा पर्ने स्यार्पू तालको छेउमा पाँचदिन सम्म चल्ने महोत्सवको बिहिबार उद्घाटन गरिएको हो । “जल, जंगल, जडिबुटी, कृषि, कला,…
११ असोज । सरकारले ३९ औं विश्वपर्यटन दिवस धुमधामका साथ मनाई रहँदा पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरु पर्यटन क्षेत्र नै ठप्प पार्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । प्रेस विज्ञप्ती निकालेर यूनिट्राभ र अखिल नेपाल पर्यटन मजदुर संघले अन्नपूर्ण तथा मनास्लु पदमार्ग क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटको…
दोस्रो स्यार्पु महोत्सव हुँदै
तस्बिर: गुगल ५ असोज । पश्चिम रुकुमको बाँफिकोट गाउँपालिकामा पर्ने मनोरम स्यार्पु तालमा दोस्रो ‘स्यार्पू पर्यटन महोत्सव’ आयोजना हुने भएको छ । गाउँपालिकाको आयोजनामा असोज ११ देखि १५ गतेसम्म संचालन हुने उक्त महोत्सवमा स्थानीय जडिबुटी, कृषि उत्पादन, तथा कला संस्कृति र…
पर्यटकको रोजाई बन्दै जुम्लाको गुठीचौर
२४ साउन । कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक सौन्दर्यका हिसावले अनेक सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यहाँको जनजीवन, परम्परा र प्रकृति भिन्न प्रकृतिको छ । आर्थिक समृद्धिका हिसावले यहाँको जल, जमीन र जंगलको अनेक महत्व छ । पर्यटनका दृष्टिले समेत प्रशस्त सम्भावना यहाँ छन् ।…
कर्णालीको पर्यटनलाई उद्योगको रुपमा विकास गरिन्छ : मुख्यमन्त्री
९ साउन । कर्णालीको पर्यटनलाई उद्योगको रुपमा विकास गरिने कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहिले बताएका छन् । बुधबार नेपाल पर्यटन पत्रकार मञ्च कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको अन्तर्रक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । कर्णालीको पर्यटन प्रर्वद्धनमा हाम्रो अभियान र प्रदेश सरकारको दायित्व विषयक…
रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटनको बजेट ४० लाख, कसरी खर्च भयो ६४ लाख ?
२५ जेठ । कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को उद्घाटन कार्यक्रममा मात्रै करिब ६४ लाख रुपैंया खर्च भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटनको खर्च विभिन्न शिर्षकमा कुल ६३ लाख ८१ हजार…
कस्तो बन्दैछ काँक्रेविहार ? (फोटो कथा)
२० जेठ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हो काँक्रेविहार । उपत्यकाको मध्यभागमा रहेको काँक्रेविहारको हाल पुनर्निर्माण भैरहेको छ । पुरातत्व विभागले उत्खनन् गरी यसको पुनर्निर्माण शुरु गरेको हो । महाभारतकालीन कला झल्किने उक्त मन्दिर हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्वीको धार्मिक गन्तव्य…
नयाँ पदयात्राको खोजी गर्न गुरिल्ला पदमार्ग गरिंदै, जनयुद्धको आधारभूमी बन्ने भयो पर्यटकको गन्तव्य
२८ वैशाख । नयाँ पदयात्राको सम्भावना खोजी गर्न नेपाल मगर पर्यटन समाजले गुरिल्ला पदमार्गमा एक्सपोजर भिजिटको आयोजना गरेको छ । तत्कालिन नेकपा माओवादीले १० वर्षे युद्ध सञ्चालन गर्दा आधार क्षेत्रको रुपमा प्रयोग गरेको रोल्पा, रुकुम, बाग्लुङ, म्याग्दी जिल्लालाई केन्द्रित…
आर्थिक समृद्धिको नारा सहित जुम्लामा औद्योगिक व्यापार महोत्सव शुरु
१३ बैशाख । उद्योग वाणिज्य संघ जुम्लाले पहिलो पटक प्रादेशिक कृषि पर्यटन तथा औधोगिक व्यापार महोत्सव विहिवार देखि शुरु गरेको छ । 'कृषि पर्यटन उद्योग व्यापार, पुर्वाधार, जुम्ला विकासको मुल आधार' भन्ने मुल नाराका साथ महोत्सव शुरु भएको हो । प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेन्द्र…